Fantaro ny fomba handravahana ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny zavamaniry | Bezzia
Ahoana ny fomba handravahana ny efitrano fandraisam-bahiny misy zavamaniry
Susana Garcia | 05/04/2021 20:00 | Fitaovana ao an-trano, Decor
Ny zavamaniry dia tsy zavamananaina velona fotsiny izay manampy antsika hamorona toerana salama kokoa sy manokana, fa izy ireo koa dia ampahany amin'ny haingon-trano. Ao amin'ny maro amin'ireo efitrano ao an-trano no azontsika apetraka zavamaniry, indrindra raha tsy manana teras na zaridaina ahazoana azy ireo isika. Hevitra tsara ny manampy loko miaraka amin'ny zavamaniry hahatonga ny efitrano fandraisam-bahiny handray tsara kokoa.
ny zavamaniry mihaingo amin'ny faritry ny efitrano fandraisam-bahiny azo apetraka amin'ny toerana maro izy ireo. Zava-dehibe ny fahalalana hoe aiza no hametrahana azy ireo mba tsy hanelingelina azy ireo ary ho haingon-trano izy ireo. Raha hanisy zavamaniry ao an-tranonao ianao dia aza misalasala mametraka ny sasany ao amin'ny efitrano fandraisam-bahininao mba hahafinaritra sy ho tsara tarehy miaraka amin'izay.
1 Ahoana ny fikarakarana ireo zavamaniry ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
2 Manampia cactus ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
3 Mamorona zoron'ny zavamaniry
4 Zavamaniry anaty sobika wicker
5 Manantona zavamaniry ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
Ahoana ny fikarakarana ireo zavamaniry ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
La Ny efitrano fandraisam-bahiny dia toerana iraisana iray andaniany ora maro. Izany no antony hamoronana faritra tena ahazoana aina ahazoana aina. Ny zavamaniry dia manampy antsika hanatsara ny hafanana amin'ny toerana rehetra. Mba hahazoana azy ireo dia tokony ho fantatsika ny karazana zavamaniry sy ny fikarakarana ilainy. Koa satria tsy maintsy manety azy ireo isika, ohatrinona no tokony hampisotrointsika azy ireo na raha mila hazavana mivantana izy ireo na tsia. Zava-dehibe ihany koa ny zava-maniry ao an-trano ihany no safidintsika, raha tsy izany dia tsy ho tafavoaka velona ao an-trano izy ireo.
Manampia cactus ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
ny cacti ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia hevitra tsaraNa dia lehibe aza izy io dia tsy maintsy mitandrina mba tsy hanimba ny biby na ny zaza. Ireo cacti ireo dia mety amin'ny karazana tontolo iainana rehetra. Ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia mamorona toerana manana toetra maro izy ireo. Ny haingo boho, ny fomba Nordic na ny endrika California dia tonga lafatra mba hamenoana ny fampiasana ireo cacti ireo, indrindra raha lehibe izy ireo. Ny cactus dia tsy mitaky fikarakarana firy, satria tsy maintsy manana rano kely izy ireo ary tsy voahidy na toy izany, koa raha vao mikarakara zavamaniry isika dia io no hevitra tsara indrindra.
Mamorona zoron'ny zavamaniry
Raha ianao toy ny fomba mahazatra amin'ny zavamaniry, hevitra tsara ny manampy zoro misy zavamaniry. Mampiasoa fitafiana na fitoeram-boky mihitsy aza mba hametrahana zavamaniry amin'ny ambaratonga samihafa. Azonao atao ny manampy azy ireo amin'ny faritra misy hazavanao tsara, akaikin'ny varavarankely. Ny zoron'ny zavamaniry dia lavorary amin'ny trano rehetra ary ahafahantsika mitandrina azy ireo mora kokoa. Azonao atao ny mampiasa fanaka taloha, satria amin'izany dia hanana hatsarana bebe kokoa izy. Raha mametraka zavamaniry marobe ianao ao anaty zoro, dia azonao atao ny manafangaro azy ireo, mifantina izay tsy mitovy, mamorona firaketana tsara tarehy.
Zavamaniry anaty sobika wicker
Ny sobika wicker dia nanjary malaza be satria izy ireo akora voajanahary izay manampy fikitika mafana ao an-trano. Izany no antony matetika anaovan'izy ireo manarona ny vilany sy manome azy miavaka manokana. Raha hividy zavamaniry lehibe ianao dia azonao ampiasaina ity karazana harona ity ho an'ny faritry ny efitrano fandraisam-bahiny. Ny sasany manana pompom na miloko ka tonga lafatra amin'ny haingon-trano eo anilan'ny zavamaniry.
Manantona zavamaniry ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
Fomba iray hafa hametrahana zavamaniry ao anaty Ny efitrano fandraisam-bahiny dia misy zavamaniry mihantona. Misy sombin-gamba hanantonana azy ireo ary tena tsara ny endrik'izy ireo, na dia mitaky asa bebe kokoa aza izy ireo satria tsy maintsy manantona «hanger» ianao ary mampiditra ireo vilany koa, izay tsy dia lehibe loatra. Ity karazana vilany ity dia ampiasaina hanasarahana ny habaka na handravahana ny rindrina sy ny valindrihana. Hevitra tsara izay manampy antsika hampiasa ireo zavamaniry amin'ny toerana maro ao amin'ny efitrano ary hanaingoana azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Ahoana ny fomba handravahana ny efitrano fandraisam-bahiny misy zavamaniry
Fahazaran-dratsy izay mety hamarana ny mpivady
Miloka amin'ny cardigans ba nataony mba hamoronana akanjo antitra